Fri, Jul 10, 2020 at 2:05am
कुकर बम भनी डिस्पोज गर्न खाेज्दा बासी भात भेटिएपछि…
मोरङ, ५ वैशाख । नेपाल बन्दका दिन बिहिबार मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा तर्साउनका लागि बनाइएको नक्कली कुकर बम राखिएको फेला परेको छ । प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहले आह्वान गरेको बिहीबार बिहान सुन्दरहरैचा नगरपालिका-७ स्थित बेलगाछीमा नक्कली कुकर बम राखिएकाे फेला परेको हो । बिहीबार बिहान सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा कुकर बम फेला पर्यो भनेर हल्ला चल्यो, स्थानीयबासीहरु त्रसित भए । पुर्व-पश्चिम राजमार्ग समेत केही समय अवरुद्द..
बालबालिका जन्मिनेबित्तिकै कि गुम्बाले लान्छ कि चर्चले !
गोरखा, ५ वैशाख गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका पुग्नुभयो भने तपाईंलाई सोध्न मन लाग्छ— के यहाँ बालबालिका छैनन् ? प्रश्न खस्न नपाउँदै यहाँका बासिन्दा भनिदिन्छन्— छन्, तर सहरमा। अथवा गुम्बामा । अथवा चर्चमा । किनभने धर्मगुरुहरूले कसको घरमा बच्चा हुर्किंदै छ भन्ने पहिला अध्ययन गर्छन् । बच्चाको नाम टिप्छन् । अनि हुर्किएपछि उनीहरूलाई काठमाडौंका थानकोट, गागलफेदी, फर्पिङ, चोभार आदि स्थान अथवा भारतसम्मै पनि पुर्‍याउँछन्..
जहाँ युवतीलाई तानेर दाजुभाईको साझा बेहुली बनाईन्छ...
गोरखा, ४ वैशाख ‘केही दिनअघिको घटना हो, राति साढे ९ जति बजेको थियो होला । बहिनी र म गफ गर्दै सुतिरहेका थियौं । एक्कासि कसैले ढोका ढक्ढक्यायो । हामी आत्तियौं । मैले डराई–डराई ‘को हो’ भनें । बाहिरबाट केटा मान्छेले ‘म हो, रक्सी खान आएको’ भन्यो । ‘हाम्रो त रक्सी बेच्ने घर होइन’, भनें । ‘माथिल्लो घरको दाइ हो क्या म,..
एजेन्सी, २ वैशाख यो दाह्री पाल्ने मानिसहरुको लागि नराम्रो र दुखद समाचार हुनसक्छ । तर वैज्ञानिकहरुले कुकुरको शरीरभन्दा बढी दाह्री पाल्ने मान्छेमा धेरै हानिकारक किटाणु तथा जीवाणु हुने तथ्य पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरुले कुकुरको शरीर र मानिसको दाह्री कुनमा बढी हानिकारक किटाणु हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनमा समावेश प्रत्येक मानिसको दाह्रीमा जीवाणु भेटिएको थियो। त्यसमध्ये आधा जीवाणु मानव स्वास्थ्यका लागि..
कस्तो कानुन ! ठगीको समाचार लेख्दा उल्टै पत्रकार नै पक्राउ
पोखरा, २ वैशाख बतास अर्गनाइजेसनका सञ्चालक सदस्य वीपेन्द्रराज बतासका विरुद्ध समाचार लेखेको आरोपमा प्रहरीले सोमबार पोखराको ताण्डव साप्ताहिकका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरेको छ । साइबर अपराध मुद्दामा कारबाहीका लागि उजुरी आएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराको आग्रहमा गिरीलाई पक्राउ गरिएको कास्कीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन्द्रमान गुरुङले बताए। ‘हामीलाई पक्राउ गरेर पठाइदिनु भनेकाले पठाउन लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘आरोप र कसुरको अनुसन्धान केन्द्रले नै..
काठमाडौँ, २ वैशाख । घरमा होमवर्क गर्न बत्ति नभएपछि सडकमा गएर होमवर्क गर्दै गरेको एक बालकको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । विकासको लहरले जताततै छाएको छ भन्ने अनेकौ किसिमका नारा लाउने र उत्सव मनाउने गरेको भएपनि कयौँ व्यक्तिहरु गरिबीको कारण न पढ्ने पढ्ने सहज वातावरण पाएका छन् न राम्रो आवासको व्यवस्था नै छ ? आजको युगमो शिक्षाको शिक्षा प्रत्येक बालबालीकाको..
काठमाडौँ, १ वैशाख वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने फूल हेर्न कौतूहलताका साथ आउने आगन्तुकमा नेपालको मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनेको संख्या लाखौँमा रहेको छ । इसाको छैटौं÷सातौँ शताब्दीदेखि फुल्दै आएको त्यो चमत्कारी फूल वैशाख १ गतेका दिन बिहानीपख फुल्नु र साँझपख ओइलाएर जानु आफैँमा एउटा आश्चर्य र कौतुहलको विषय बनेको छ । दलितमध्ये अति पिछडिएको दुसाद जातिको कुलदेवता तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पूजनीय..
काठमाडौँ चैत २५। सपना नदेख्नु देखेपछि ठूलै देखनुपर्छ भन्ने उदाहरणलाई यी बालकले पूरा गरेर छोडेका छन् । अस्ट्रेलियाका एक बालकले आफ्नै वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गरेर दुनियाँ नै चकित पारेका छन् । जो कोहीलाई यस्तो सपना देख्नु दिवास्वप्ना मात्रै हुन्छ । तर ती बालकले आफ्नो सपनालाई सार्थकता बनाएरै छोडेका छन् । सानै उमेरदेखि निकै जिज्ञासु स्वभावका १० वर्षिय एलेक्स जेक्वाट आफ्नै वायुसेवा सञ्चालन..
काठमाडौ चैत २४ । अमेरिकामा एकजना १४ वर्षीय बालकले भिडियो गेम खेलेरै वर्षमा झण्डै सवा २ करोड रुपैयाँ कमाएका छन् । ग्रिफिन स्पिकोस्की नाम गरेका ती बालकले प्रत्येक दिन करिब १८ घण्टासम्म फोर्टनाइट भिडियो गेम खेल्दछन् । त्यसपछि आफ्नो १२ लाख सब्सक्राइबर भएको युट्युब च्यानल स्केपटिकमा अपलोड गरेर प्रशस्त पैसा कमाउछन् । अहिले उक्त भिडियोमा ७ करोड १० लाख भ्यूज पुगिसकेको छ..
विश्वभर चर्चा ! संसारकै धनी मानिसको ३८ खर्बको सम्बन्धविच्छेद
चैत्र २२ संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेफ बेजोस र उनकी पत्नी मक्केन्जी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो ३५ बिलियन अमेरिकी डलरको (लगभग ३८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) सम्बन्धविच्छेदका लागि सहमत भएका छन्। पारपाचुकेपछि मक्केन्जीसँग जेफले स्थापना गरेको अनलाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत शेयर हुनेछ। तर उनको वाशिङ्टन पोस्ट दैनिक र अन्तरिक्ष यात्रा कम्पनी ब्लू ओरिजिनसँग कुनै सम्बन्ध रहने छैन। उनीहरूबीच २५ वर्ष वैवाहिक सम्बन्ध थियो। यो अहिलेसम्म..
९ जना नर्स एकैचोटी एउटै अस्पतालमा आमा बन्ने भएपछि अस्पतालले गर्यो यस्तो तयारी
काठमाडौँ, २१ चैत । अमेरिकाको मेन अस्पतालतमा कार्यरत ९ जना नर्सहरु एकैपटक आमा बन्ने भएका छन् । आउँदो अप्रिलदेखि जुलाई महिनाको बीचमा उनीहरु आमा बन्ने एक रिपार्टमा उल्लेख गरिएको छ । एउटै अस्पतालका ९ जना नर्स एकैपटक आमा बन्ने भएपछि उनीहरु हर्षित भएका छन् । एकै पटक आमा बन्ने क्रममा रहेकी एक नर्स अमाण्डा स्पियर भन्छिन्, ‘काममा आउँदा अरुको पेटको बढ्दो आकार..
यो परेवा १५ करोड रुपैयाँमा बिक्यो ! के छ आखिर यो परेवामा त्यस्तो ?
कठमाडौ चैत २० । बेल्जियममा एउटा परेवा १.२५ मिलियन यूरो अर्थात् १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा लिलामी भएको छ । अक्सन (लिलामी) हाउस पिपाले अर्मान्डो नामको यो परेवालाई ‘लामो दुरीको सबैभन्दा उत्कृष्ट बेल्जियमको परेवा’ बताएको छ । साथै यो परेवालाई ‘परेवाहरुको लूईस हेमिल्टन’ पनि बताइँदैछ । यो लिलामी अघि सबैभन्दा महँगो परेवा ३.७६ लाख यूरो (४ करोड रुपैयाँ) मा बिक्रि भएको थियो ।..
श्रीलङ्काका क्याप्टेन करुणरत्नेको चालक अनुमतीपत्र रद्ध
कोलम्बो, १९ चैत : श्रीलङ्काको टेष्ट क्रिकेट टिमका क्याप्टेन दिमुथ करुणरत्नेले सोमबार प्रहरीसँग क्षमायाचना गरेका छन् । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाईरहेका बेला प्रहरीले उनलाई अनुचित व्यवहार गरेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । गत आइतबार उनले गलत दिशाबाट सवारी चलाएपछि ट्याक्सीसँग ठक्कर खाएको थियो भने ट्याक्सीका चालक घाइते भएर अस्पताल लैजानु परेको थियो । उनको सवारी साधन एउटा ट्याक्सीसँग ठोक्किएको र ट्याक्सीका..
ब्रुनाई राजाको अकुत सम्पति - ७ हजार कार, १७ सय कोठा भएको भव्य महल ! (तस्विर)
काठमाडौ १८ चैत । ब्रुनाईको राजाको जीवनशैली हेर्दा अचम्म नमान्ने मानिसहरु कमै होलान् । किनभने उनी संसारकै धनी व्यक्ति नभएपनि खरबौको मालिक हुन् । उनको नाम हल्सन बोकिल्याह(सुल्तान) हो । करिब ४ लाख ५० हजार जनसंख्या भएको ब्रुनाई इन्डोनेशिया र मलेशियाको छिमेकी देश हो ।यो देश तेलको कारण निकै धनी छ । त्यहाकै राजा सुल्तान हुन् । उनको महलमा लगभग १ हजार..
बैवाहिक सम्बन्ध कति गहिरो छ थाहा पाउनुहोस् यसरी !
काठमाडौँ १७ चैत । विवाहको सुरुवाती समय निकै रोमान्चक हुने गर्छ । हिजो आफुलाई एक्लो महसुस गर्ने तपाई अब एक्लो रहनुभएन् । जीवनको नयाँ अध्याय भनेको नै विवाह हो । हिजोलाई भुलेर तपाईले नयाँ जीवन नयाँ दिनको सुरुवात गर्नुभएको छ । तपाईसँग भएका खुसी, उमंग, दुख भागाइ , समस्या एक आपसमा बाँडिनेछन् । हिजो तपाई एक्लै पकाएर खानेकुरा अब दुईजनाको लागि पकाउनुपर्नेछ ।..
ट्याक्सी चालकको अमानवीय व्यवहार ! यात्रुलाई सडकमै छाडेर भागेपछि…(भिडियो)
काठमाडौँ, १५ चैत । गोर्कणेश्वर ४ का प्रविण कारञ्जित बुधबार बिहानै बाबु गोपाललाई लिएर स्कुटरमा चावहिलको मेडिकेयर अस्पताल पुगेका थिए । ईसीजी गरेपछि अस्पतालले उनलाई घर पठाइदियो । अस्पतालमा निस्केर चिया पिएपछि झण्डै साढे ११ बजेतिर उनले बुबालाई ट्याक्सी चढाएर आफू घरतिर हिँडेका थिए । भिडियोमा जनाइएअनुसार सो घटना चाबहिलको सडकमा भएको हो । ट्याक्सी चढेको केही बेरमै एक व्यक्तिलाई हर्टअट्याक हुन्छ..
साबुनको रङ फरक-फरक भएपनि किन सेतै आउँछ फिँज ?
काठमाडौ, १४ चैत । वास्तवमा साबुनको फिँज यस्तै सानो सानो गोलाकार पातलो तहबाट बनेको हुन्छ । तर हामीले कहिल्यै पनि विचार गरेका छैनौ । साबुन विभिन्न रङको रातो , पहेलो , सेतो हुन्छ । तर लुगा धुदाँ साबुन जस्तो रङको भएपनि सेतो नै फिँज आउँछ । आज हामी तपाईहरुको यसको कारण बताउदै छौ । यो जान्नको लागी तपाईले स्कुलमा विज्ञान विषयमा पढेको..
सांसद उम्मेदवारको घोषणा, चुनाव जिते हरेक घरलाई रक्सी
एजेन्सी, चैत १३ भारतमा अहिले लोकसभा चुनावको माहोल तातेको छ । उम्मेदवारहरुले आफ्ना मतदातालाई आकर्षित गर्नका लगि अनेक तिकडम गरिरहेका छन् । यसैबीचमा तमिलनाडुका एकजना उम्मेदवारले अनौठो खालको अफर घोषणा गरेका छन् । स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका एक उम्मेदवारले आफुले चुनाव जितेमा सबै मतदाताको घरमा १०–१० लिटर रक्सी सित्तैमा दिने घोषणा गरेका छन् । पेशाले सूूचिकार रहेका ५५ वर्षका शेख दाउद तीरुपुर लोकसभा क्षेत्रबाट..
नानजिङ, १२ चैत पुरातत्वविद्हरुले चीनको जियाङ्सु प्रान्तमा दुई हजार ५०० वर्ष पुरानो चिहानबाट सग्लो अन्डा भेटिएको सोमबार जनाएका छन् । उत्खनन्का क्रममा अन्डाले भरिएको जारमा एउटा मात्र अन्डा फुटेको अवस्थामा पाइएको थियो । नानजिङ म्युजियम इन्स्टिच्यूट अफ आर्कियोलोजीका अनुसन्धाताहरुले लियाङ शहरको शाङसिङस्थित एउटा विशाल चिहानमा उत्खनन् गर्दा ढक्कन लगाइएको माटोको भाँडोमा ती अन्डा फेला परेको बताएका छन् । मानिसको हातले छुँदा अन्डा फुट्ने..
काठमाडौँ, १२ चैत नेपालमा नयाँ प्रजाति ‘बाघे माउसुली’ फेला परेको छ । बाघको जस्तै सुन्दर पाटा हुने भएकाले यसलाई बाघे माउसुली भनिएको हो । जैविक विविधताको अध्ययन गर्ने क्रममा माउसुलीको नयाँ प्रजाति लेपर्ड गे (बाघे माउसुली) बाँके जिल्लाको कम्दी जैविक मार्गमा पहिलो पटक भेटिएको हो । युब्लिफेरिडे परिवारअन्तर्गत पर्ने यो माउसुलीको अभिलेख भएसँगै नेपालमा सरिसृप प्रजातिको नयाँ परिवार थपिएको छ । नेपालमा..
एकजना विद्यार्थीका लागि डेढ करोड खर्च गरेर सरकारले स्कुल खोल्दै , यस्तो छ कारण
काठमाडौ ११ चैत । अहिलेको सुचना र प्रविधिको युगमा शिक्षा एकदमै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । किनभने पहिलेको जमानामा कम मानिसहरु पढेलेखेका हुन्थे । तर अहिले धेरै पढे लेखेका भिडमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । त्यसैले सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा निकै चासो देखाउने गर्दछ । आज हामी त्यसैमध्येको एक अचम्मको शिक्षाको बारेमा कुरा गदै छौ । जहाँ सरकारले एकजना विद्यार्थीका लागि डेढ करोड..
दमौली, १० चैत गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा ‘मुख्यमन्त्री नमूना कृषि गाउँ’ को घोषणा समारोह तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ भानुमतिमा तय भएबमोजिम मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ शनिबार साँझ नै यहाँ आइपुग्नुभयो । मुख्यमन्त्रीको गुरुङको साथमा हनुहुन्थ्यो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा । उहाँहरुलाई स्थानीयले फूलमालाले..
बर्दियामा सडक खन्दा चाँदीका सिक्का फेला
धम्बोजी, ८ चैत बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–६ सोनपुरदेखि जोगनपुरसम्म सडक खन्ने क्रममा चाँदी र तामाका सिक्का फेला परेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले माटोको घैंटोमा राखिएको ५४ मिलिग्रामबारबरको पाँच थान चाँदीका सिक्का र सात केजी दुई सय ग्रामको तामाको सिक्का फेला परेको बताउनुभयो । सडकलाई स्काभेटरबाट खन्दा करीब तीन फिट गहिराइमा चाँदीका सिक्का र तामाका सिक्का फेला परेको प्रहरीेले जनाएको छ..
ताज्जुब लाग्छ ! चिट चोर्ने यस्ता तरिका दिमागमा कहाँबाट आउंछन् ?
एजेन्सी, ७ चैत परिक्षामा विद्यार्थीहरुले चिट नचोरी आफ्नै दिमागले मात्र राम्रो अंक ल्याउन भनेर शिक्षकहरुले विभिन्न किसिमका नियमहरु बनाएका हुन्छन् । तर पनि विद्यार्थीहरु अनेक नयाँ नयाँ तरिका अपनाएर चिट चोरी राखेका छन् । अझ भन्नुपर्दा केटाहरुको तुलनामा केटीहरु बढी चिट चोर्न माहिर हुन्छन् । किनभने उनीहरुले आफ्नो संवेदनशील अंगमा चिट लुकाएर ल्याएर चोर्ने गर्दछन् । आफ्नो गोप्य अंगमा चिट लुकाएर..
कोरियाका युवायुवतीले विवाह गर्न मानेनन्, अहिलेसम्मकै न्यून तथ्याङ्क
सोल, ६ चैत दक्षिण कोरियामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा विवाह दरमा कमी आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक अस्थिरतालगायतका कारण यहाँका युवायुवतीले विवाहलाई कम प्राथमिकता दिन थालेको समाचारमा उल्लेख छ । सन् २०१८ मा एक हजार युवायुवतीमा ५ प्रतिशतले विवाह गरेको पाइएको छ । यो तथ्याङ्क अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून हो । कोरियाको तथ्याङ्क विभागले वैवाहिक सम्बन्धको दर के कति रहन्छ..
विश्वकै सबैभन्दा ठुलो झुट ! तपाई पनि यसकै शिकार !
काठमाडौँ, ५ चैत । हामी विश्वमा नै प्रचलित रहेका केही झुठहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ जुन कुरा सुनेपछि तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ झुठ तथ्य के रहेछ भन्ने कुराको बारेमा । दाह्री जुँगा काट्नाले बाक्लो हुन्छ भन्ने मान्यता : विश्वको जुनुकै ठाउँमा जानुहोस् तपाईले यसलाई साँचो मान्दै आउनुभएको छ । तर वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धनले यसरी दाह्री जुँगा काटिरहुको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । हर्मोनको..
बुद्धिमानी भनिएका व्यक्तिमा हुन्छ यस्तो नराम्रो बानी !
काठमाडौँ, ४ चैत । केहीको दिमाग तिक्ष्ण बुद्धि भएको हुन्छ भने केहीको दिमाग मन्द बुद्धि भएको हुन्छ । केही व्यक्तिहरु तिक्ष्ण दिमाग भएकै कारण बुद्धिमानी रहेका हुन्छन् । तर केही यस्ता गल्तीहरु रहेका छन् जुन बुद्धिमानी भनिएकाहरुमा पनि खराब बानीको आचरण रहेको हुन्छ । एक अनुसन्धान मार्फत पत्ता लागेको बुद्धिमानी मानिसमा भएका केही गल्तीहरु : १. अव्यवस्थित कोठा : प्राय धेरै बुद्धिमानी व्यक्तिको कोठामा..
तरिका हो ! दाइजोमा १ रुपैयाँ लिएका दुलाहले हेलिकप्टरमा लगे दुलही
काठमाडौँ, ३ चैत । दाइजो नल्याएको निहुँमा जिउँदै जलाइएको, हत्या गरिएको खबरहरु बेला बेला सुन्दै आएका छौँ । तर भारतका एक व्यक्तिले भने दाइजो धेरै माग्नेहरुको लागि गतिल्लो झापड हानेका छन् । परम्परावादी सोच विचार राखेर विवाह गर्दा अर्काको सम्पत्तिमा आँखा लगाउने व्यक्तिहरुको लागि यी व्यक्तिले गरेको कार्य निकै स्रहानिय बनेको छ । भारतको हरियाणा जिल्ला सोनीपतको हसनगढमा केही दिन अगाडी एउटा..
आमनेपालीको वास्तविक चित्र दर्शाउने 'भाइरल' भएको एक तस्बिर
काठमाडौं, ३ चैत आइतबार बिहानदेखि एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । जुन तस्बिरमा वैदेशिक रोजगारका लागि कतार जान लागेका छोरालाई बिदाइ गर्न आएका एक बाबुको हो । जसमा छोरा ओझेल परिसके पनि धेरै बेर उनले हेरिरहेका देखिन्छन् । खुट्टामा चप्पल लगाएर तराईका कुनै एक जिल्लाबाट आएका जस्ता देखिन्छन् यी व्यक्ति । उनी आफ्नो सन्तान गएको बाटो धेरै बेरसम्म आँखाले पछ्याइरहेका..
'फ्लर्ट' गर्नमा युवा भन्दा युवतीहरु खप्पिस ! यस्तो छ 'स्टाईल'
काठमाडौँ, ३ चैत । वास्तवमा जिस्काउने बनि ठिक होइन । तर हामीले सुन्ने र देख्ने गरेका छौँ युवाहरु युवतीलाई एक्लै भेटेको देखेको समयमा अनेकौ बाहना बनाएर बोलाउने गर्छन् । जसकारण युवतीहरु बाहिर एक्लै हिड्न चाहँदैनन् । यद्यपी यस्तो बानी युवामा मात्र हैन युवतीहरुमा समेत हुन्छ । प्राय हरेक युवा युवतीले एक अर्कालाई केही न केही कुराको बाहना बनाएर जिस्काउने गर्छन् । उनीहरु युवाहरुलाई आफ्नो..
Results 603: You are at page 11 of 21